လက်ဖြင့်နှင့်အဝတ်လျှော်စက်အတွင်းတရားစွဲဖိနပ်ကိုလျှော်ဖို့ကိုဘယ်လို - ထွက်ခွာ
အားကစားဖိနပ် စစ်မှန်သောတရားစွဲထားစျေးကြီးများနှင့်ဂုဏ်သရေရှိကြည့်ပေမယ့်အလွယ်တကူရေနှင့်ရွှံ့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာပုံပျက်နေသောကြောင့်ကနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ တရားစွဲဖိနပ်ကိုလျှော်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမှ, သင်အပြီးအပိုင်သင်အကြိုက်ဆုံးဖိနပ်၏ဘဝတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ် wear တရားစွဲဖိနပ်စောင့်ရှောက်မှု၏အမှု၌ပုံမှန်စေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးမပါဘဲရိုးရိုးမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤသည်အထူးစောင့်ရှောက်ခြင်းအေးဂျင့် (ရေမှုန်ရေမွှား, Shampoo &, သုတ်ဆေး, ဖြီး) နှင့်စမ်းသပ်ပြီးအိမ်မှာကုစား (lather, ခဲဖျက်, ကော်ဖီခိုင်ခိုင်လုံလုံ) အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အခြေခံစည်းမျဉ်းကို - ဖုန်နှင့်အစွန်းအထင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်အားလုံးထိန်းသိမ်းရေးသာဖိနပ်၏ပြီးပြည့်စုံသောခြောက်သွေ့ပြီးနောက်စတင်ခဲ့နိုင်ပါသည်။ damp chamois ရှင်းလင်းဖို့မဆိုကြိုးပမ်းမှုသာင်း၏ပုံနှင့်ရီဖိုင်းပြောင်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၏အသွင်အပြင်ပျက်စီးစေပါလိမ့်မယ်။
အချိန်အဆက်မပြတ်ရှားပါးမှု၏အခြေအနေများအတွက်အဘယ်သူမျှမလက်စွဲစာအုပ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူရှုပ်ထွေးပင်အများဆုံးအကြိုက်ဆုံးဖိနပ်ဖို့လိုသည်။ ထို့ကြောင့်သဘာဝမေးခွန်းတစ်ခုကို - ကအလိုအလျောက်စက်၏အကူအညီဖြင့်တရားစွဲဖိနပ်ကိုလျှော်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ ဒါကြောင့်အရည်အသွေးမြင့် faux တရားစွဲ၏ထုတ်ကုန်မှကြွလာသောအခါ, စက်များ၏စည်အတွက်ရေချိုးသူတို့ကိုအဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့သဘာဝကတရားစွဲဘို့, ရေနှင့်ဆပ်ပြာနှင့်အတူရေရှည်အဆက်အသွယ်ဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စွန့်စားမှုကတည်းကသာအစွန်းရောက်လိုအပ်ချက်၏အမှု၌ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပြီး, တင်းကြပ်စွာအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်။
အကြိုအလုပ်။ သင်စည်ဖို့ဖိနပ်ပေးပို့မီ, သူတို့ကတစ်ဦးတည်းသောမှဖုန်လိုက်နာမှု၏သန့်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်။ ထိုအခါဂရုတစိုက်ပြင်ပပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု (စသည်တို့ကိုချုပ်ရိုး၏မတူကွဲပြား, အသေးစားပေါက်တွေ,) အတွက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ မည်သည့်စက်ကိုအဝတ်လျှော် cancel သာ. ကောင်း၏လျှင်။ ဖိနိပ်ကြိုးအားဖယ်ရှားခြင်း, လျှပ်စစ်, နှင့် Velcro စွဲစေရမည်ဖြစ်သည်။
အမှုန့်များ၏ရွေးချယ်ရေး။ တရားစွဲဖိနပ်ကိုလျှော်ဖို့ gels သို့မဟုတ်တောင့၏ပုံစံအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်လျော်ဆပ်ပြာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူတို့ကအပေါက်တရားစွဲခုံဖိနပ်နိုင်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမအနည်းငယ်သာပျော်ဝင်စိုင်အခဲရှိသည်။
Mode ကိုရှေးခယျြ။ အများဆုံးကလက်ရှိစက်တွေအတွက်အဝတ်လျှော်အားကစားဖိနပ်များအတွက်အထူး mode ကို manufacturers ။ ဒါဟာထို့နောက်မဟုတ်ပါဘူးလျှင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသံသရာအပေါ်ပိုကောင်းတရားစွဲဖိနပ်ကိုဆေးကြောရမည်။ ရေချိုးခန်းသုံးအထူးအိတ်အသုံးပွုသငျ့နှင့်စည်ဖိနပ်မပိုနှစ်ခုထက်အားလုံးအတွက်ဖြစ်သင့်သည်။
ခြောက်သွေ့။ အပြေးဖိနပ်ခိုင်မြဲစွာကိုယ်တိုင်ကြေခြင်းနှင့်ပိုလျှံအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သန့်ရှင်းသောစက္ကူဖြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကွာအပူနှင့်တိုက်ရိုက်နေရောင် မှစ. , ပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်ပိုကောင်းသူတို့ကိုအခြောက်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလက်ရေဆေးတရားစွဲ Sneaker ဖျော်ဖြေနေသည်:
တစ်ဆပ်ပြာဖြေရှင်းချက်ပြင်ဆင်ပါ။ ဒါဟာတရားစွဲနှင့်မည်သည့်အဘို့အထူးအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အဝတ်လျှော်ဘို့ဂျယ် သို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းဆပ်ပြာ။
ဖိနပ်ထုတ်ယူခြင်း။ ကောင်းစွာညှစ်နှင့်ဖိနပ်၏မျက်နှာပြင်ကိုသုတ်, (ဖြစ်နိုင်ရင်အဖြူ) ဖြေရှင်းချက်သည်စင်ကြယ်သောအဝတ်စိုစွတ်စေသော။ ကျနော်တို့ပုံကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါမပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတာ, ညင်ညင်သာသာထိုသို့ပြုကြ၏။
လြျှော။ ဖိနပ်လုပ်ငန်းများ၌ပြီပြီးတာနဲ့သူတို့ဆပ်ပြာနှင့်အတူဆေးကြောရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအတွက်ကိုထိပုတ်ပါအောက်မှာသို့မဟုတ်ရေတစ်ဝှမ်း၌စေပါဘူး, ဒါကြောင့်ပိုလျှံအစိုဓာတ်အတွက်တရားစွဲ၏ပုံပျက်သောဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်တရားစွဲ Sneaker ဆေးကြောဖို့လိုအပျတဲ့ဆပ်ပြာဆေး - ရှာလကာရည်အနည်းငယ်ကျဆင်းမှုများနွေးရေထဲမှာစိမ်စင်ကြယ်သောအထည်။
ခြောက်သွေ့။ ရေကုသမှုပြီးစီးပြီးနောက် Sneaker အထည်နှင့်အတူခြောက်သွေ့သောသုတ်များနှင့်လုံးဝခန်းခြောက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အနိမ့်အဆီနို့ (1 ခွက်) + ဆိုဒါ (1 Tsp ။ ဇွန်း) ။ ဆိုဒါ-နို့အရောအနှောများနှင့်စင်ကြယ်သောအထည်အိတ်ထဲ၌ Wettable ညစ်ညမ်းမှုသုတ်။
Talc, တရားစွဲခြင်းမှအမဲဆီ၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ကူညီရန်စီဓါတ်ပါသို့မဟုတ်မြေဖြူတွေသုံးပြီး။ သူတို့ကိုမဆိုတိုတောင်းတဲ့ခဏထားခဲ့ပါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, ပြီးတော့ညင်ညင်သာသာတစ်တောင့်တင်းဖြီးနှင့်အတူချွတ်ဆေးကြောသန့်စင်ဖြန်း။ အညိုရောင်သို့မဟုတ်အဝါနုရောင်ရှိသော Sneaker ဘို့ကော်ဖီခိုင်ခိုင်လုံလုံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အမိုးနီးယား + ကစီဓါတ်ပါ။ ဤအပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ Slurry တရားစွဲဖုံးကွယ်နှင့် refresh ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဒါဟာဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်ကာဖြီး၏အကြွင်းအကျန်ကိုချွတ်လှုပ်ထို့နောက်အခြောက်မှစွန့်ခွာရပါမည်။
အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့ - ဖိနပ် poshorkalis suede?
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ရှိသမျှတရားစွဲဖိနပ်မီးလောင်လျှင်အဖြစ်အိမ်ခြံမြေရှိပါတယ် - ကအဖြူ scuff နှင့်တောက်ပပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများပြသထားတယ်။ တရားစွဲဖိနပ် recover လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ - ဆိုဖိနပ်စတိုးဆိုင်မှာဝယ်ယူနိုင်သည့်တရားစွဲအရောင်များအတွက် tool ကိုသုံးပါ။ အကြို Sneaker အထူးကို double-တဖက်သတ်ဖြီးကိုစင်ကြယ်စေ။ ဖြစ်စဉ်ကိုဖိနပ် 25-30 စင်တီမီတာအကွာအဝေးမှာဖြစ်, ပြီးတော့ 10-12 နာရီများအတွက်ကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်အရပ်ဌာန၌အခြောက်မှပေးပို့သင့်ပါတယ်။
ဗီရိုထဲမှာရှုပ်ထွေး clean up လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ဦးဂျာကင်အင်္ကျီ padding ကို polyester ဆေးကြောဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မည်သို့လျင်မြန်စွာခရိုဝေ့ဖ်ကို clean up လော
ထိထိရောက်ရောက်ဖုန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်သက်သေပြနည်းလမ်းများ - ထိုကော်ဇောသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း
ကြော့ Dress ကျောင်းကပွဲ 2016
တူရကီအသည်း - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
လစ္စဘွန်းအတွက် Georgina Rodrigues စီရော်နယ်ဒိုလှပသောတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနား Quina ဆုပေးပွဲဆု
ကြက်ဥနှင့်အတူ Patti - ရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများအရသာ Home-မီးဖုတ်ထားသော
Pkhali bean ကို
ဘလက်ဘယ်ရီနှင့်အတူကိတ်မုန့် - ပုံမှန်မဟုတ်သောချက်ပြုတ်နည်းများ၏9အရသာ BlackBerry ပိုင်
နယူးဇီလန်ခရီးစဉ် Adele အဘိဓါန်အပူပိုင်းမိုးရှာခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရီအနွယ်အောက်မှာ couture စားဆင်ယင်အတွက်လုပ်ဆောင်